ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၁၀
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Chen Hai အား ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင်မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားရှေးယခင်ကတည်း က ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခဲ့မှု နှင့် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရနှင့်တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှု အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်သူများမှရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းနေမှုအခြေအနေများနှင့်အခက်အခဲအခြေအနေများ၊ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှအပြုသဘောကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင်ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင် ရာတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးတို့သည် အဖွဲ့ဝင်များ နှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီးအား လကျခံတှဆေုံ့
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E.Mr. Chen Hai အား ယနညေ့နပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး)နှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာတရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျမွနျမာနိုငျငံနှငျ့ တရုတျနိုငျငံတို့အကွားရှေးယခငျကတညျး က ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျခဲ့မှု နှငျ့ နှဈနိုငျငံအစိုးရနှငျ့တပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရငျးနှီးစှာဖွငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကျြရှိမှု အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျပွညျသူမြားမှရှေးခယျြသညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါတှငျ လြှောကျလှမျးနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့အခကျအခဲအခွအေနမြေား၊ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ နိုငျငံတျောအစိုးရနှငျ့တပျမတျောမှဆောငျရှကျလကျြရှိမှုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျ အရေးကိစ်စမြားနှငျ့ ပတျသကျပွီး ဖွရှေငျးဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးရေးနှငျ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမြားတှငျ တရုတျနိုငျငံမှအပွုသဘောကူညီဆောငျရှကျပေးလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး)နှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျ ရာတရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံသံအမတျကွီးတို့သညျ အဖှဲ့ဝငျမြား နှငျ့အတူ အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံ ရိုကျခဲ့ ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။